हुवावेद्वारा फोल्ड गर्न मिल्ने तेस्रो मोबाइल फोन सार्वजनिक « Drishti News
फाल्गुन ११, २०७७ मंगलबार
बेइजिङ, ११ फागुन । अमेरिकी प्रतिबन्धसँग जुझिरहेको चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावेले फोल्ड गर्न मिल्ने मोबाइल फोन सोमबार सार्वजनिक गरेको छ ।
आठ इन्च (२० सेमी) फराकिलो स्क्रिन भएको यो फोन हाल चिनियाँ बजारमा मात्र बिक्री गरिने कम्पनीले जनाएको छ । मेट एक्स२ शृंखलाको मोबाइल फोन सार्वजनिक गरेको हुवावे टेक्नोलोजिज हाल अमेरिकी प्रोसेसर चिप्स र गूगल सेवाबाट बन्चित छ ।
गत वर्ष, हुवावे विश्व मोबाइल बजारमा बिक्रीका दृष्टिबाट पहिलो स्थानबाट छैटौं स्थानमा झरेको थियो । हुवावेको मेट एक्स२ मोबाइल फोन फोल्ड गर्न मिल्ने तेस्रो मोबाइल फोन हो । यस मोबाइल डिभाइसमा राम्रो दृश्य र भिडियो तथा गेमका लागि राम्रो आवाज छ । यस फोनमा हुवावे आफैंले विकास गरेको निकै उन्नत किसिमको किरिन ९००० हजार चिप्सको प्रयोग गरिएको छ ।
हुवावेका उपभोक्ता इकाईका अध्यक्ष रिचार्ड यूले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी पछिल्लो शृंखलाको मोबाइल फोनले प्रयोगकर्तालाई विशेष अनुभूति दिलाउन सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ । यूका अनुसार, मेट एक्स२ को मूल्य चिनियाँ बजारमा दुई हजार ७८५ अमेरिकी डलर छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाले अर्थमन्त्रालय ठूलो आर्थिक भारबाट मुक्त
काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन सर्वोच्च अदालतले बदर गरेसँगै अर्थमन्त्रालय ठूलो आर्थिक भारबाट मुक्त
मुलुकको समृद्धिका लागि स्थिरता आवश्यक छः अध्यक्ष गोल्छा
पर्वत । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मुलुकको समृद्धिका लागि स्थिरता र स्थायित्व
महिला लघुवित्तको आइपीओ शुक्रवार बाँडफाँट हुने
काठमाडौँ । महिला लघुवित्तले सर्वसाधारणमा बिक्री गरेको आइपीओ फागुन १४ गते शुक्रबार बाँडफाँट गर्ने भएको
नेप्से प्रणालीमा गडबढी आएपनि शेयर बजारले लय समात्यो
काठमाडाैं । शेयर बजारले सकारात्मक लय समातेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला
अञ्जुले सुटुक्कै गरिन् विवाह ! (फोटोफिचर)
काठमाडौं । नेपाली सांगीतिक क्षेत्रकी चर्चित गायिका अञ्जु पन्त सुटुक्कै वैवाहिक जीवनमा बाँधिएकी छन् ।
खुवालुङ भत्काउने ओलीको भनाइविरुद्ध विद्यार्थी र युवा आन्दोलित
दमक । किरात सभ्यताको धरोहर खुवालुङ भत्काउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णयविरुद्ध झापाका युवा र विद्यार्थी
दृष्टिका १० हेडलाइन्स् : देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्तावदेखि राजीनामा नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको अडानसम्म
हेडलाइन्स् : १. कांग्रेससँगको सहकार्यमा सरकार बनाउने नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहको तयारी, देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव,